काठमाडौमा पनि यस्तो किसिमको लिभिङ टुगेदर,आखिर किन युबा युबती लिभिङ टुगेदरमा रमाइ रहेका छन् ।भिडियोसहित – kollywood hungama
काठमाडौमा पनि यस्तो किसिमको लिभिङ टुगेदर,आखिर किन युबा युबती लिभिङ टुगेदरमा रमाइ रहेका छन् ।भिडियोसहित
काठमाडौं।तेह्रथुमका २० बर्षीया पाइलोस कुरुम्वाङ लिम्बु ४ बर्षअघि फोहोर मैला उठाउने रिक्सा चलाउँथे ।उनको गुजारा यसै गरी चलेको थियो । धोबीघाटामा ३० बर्षीया मन्थली क नाम परिवर्तनले खानानास्ता खुवाउने सामान्य होटल राखेकी थिइन् ।लिम्बु त्यही होटलमा बिहान बेलुका खाना खाना खान्थे । श्रीमान सँग छुटिएर होटल चलाउँदै आएकी मन्थलीको मन पनि कमलो ।त्यसरी खान थालेको महिना दिन नबित्दै उनी र होटल साउनीबीच हिमचिम बढ्यो । यो हिमचिम लिभिङ टुगेदरसम्म पुग्यो ।
उनको साथमा छोरीसमेत थिइन् ।सामान्य होटल राम्रोसँग नचल्दा छोरी पढाउन, पसलको सामान जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किलै थियो मन्थलीलाई त्यसैले उनीहरु खुसीराजीले लिभिङ टुगेरमा बस्न पुगे । मन्थलीले खुसीको दिन आएजस्तो महसष गर्न थालिन् ।झड्केलो छोरीलाई भए पनि लिम्बुले उनलार्य नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा पढाए । ११ बर्षीया जावलाखेल क्ष नाम परिवर्तन् लिम्बुलाई बुबा भनी सम्बोधन गर्थिन् । समय वितेर तीन बर्ष पुग्नै लागेको थियो लिम्बुको मनमा पाप पलाउन थाल्यो । भिडियो हेर्नुहोस
Previous दशैंमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ! गाडीमा यात्रा गर्दा उल्टी हुन्छ ? जानिराख्नुहोस् रोक्ने घरेलु उपाय।
Next फुटबल स्टार रोनाल्डोले युवतीलाई अपार्टमेन्टमा जबर्जस्ती गरेको खुलासा